प्रम अाेलीकाे दिल्ली भ्रमण : के भयो प्रगति ? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रम अाेलीकाे दिल्ली भ्रमण : के भयो प्रगति ?
काठमाडौं, चैत २६ । बर्षोदेखि चर्चा र वार्ताको प्रथमिकतामा रहको मुल विषयमाथि प्रगति समीक्षा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषयमा छलफल हुने अपेक्षा थियो ।
नेपाल र भारतबीच रहेका कुटनीतिक प्रश्नको सम्बोधन गर्न दुवै देशका तर्फबाट गठन गरिएको प्रबुद्ध ब्यक्ति समुह ईपिजि मा पनि पुनरावलोकनको विषयमा समझदारी भएको थियो । तर, प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।
ओलीका भ्रमणमा यो विषय ठोस छलफल हुन सकेन ।
ओली नेपाल, भारत ईपिजीले आगमी असारसम्म २१ औँ शताब्दीको यथार्थबोध हुने प्रतिवेदन दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
यसमा मोदीले सही थपे । तर, वार्तामा सअमागी नेपाली अधिकारीका अनुसार यसबो थप छलफल भएन ।, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस विश्व जनसङ्ख्या दिवसः जनसाङ्ख्यिक असन्तुलनको खतराप्रति सजग हुन आग्रह